Hafiriana no iainan'ny fitiavana?
Ny valin'ny fanontaniana mikasika ny habetsaky ny fitiavana dia miaina anaty fifandraisana, ny antontan'isa dia tsy manome fanantenana - tokotokony ho 3 taona, aorian'io 45% -n'ny mpivady no miavaka. Na dia izany aza dia miseho mandrakariva ny teoria vaovao, manazava ny atao hoe fitiavana, ary koa ny faharetan'ny famaritana azy.
Hafiriana ny fitiavana dia miaina ao anatin'ny fanambadiana?
Hatramin'ny fomba fijery ny fizaka-pahaizana, ny fitiavana dia vokatry ny "cocktail" hormonina miditra ao amin'ny ra, izay miteraka fisavorovoroana ny eritreritra, ny tsy fahitan-tory , ny fitsapana, ny toetry ny hafaliana ary ny famantarana hafa amin'ity fahatsapana ity. Io toetry ny fitiavana lalina io dia maharitra fotoana fohy - hatramin'ny enim-bolana. Ary raha mbola mifankatia ireo beloved taorian'io vanim-potoana io, dia samy hafa ny fizotry ny psykolojika.
Matetika ny fanontaniana mikasika ny habetsaky ny fitiavana dia manandrana mamaly ny psikology. Ireo manam-pahaizana manokana dia manavaka ny dingana maromaro momba ny fitiavana, izay misolo tena ny tsirairay:
Ny fitiavana, ny fitiavana - io dingana io dia maharitra hatramin'ny andro vitsivitsy ka hatramin'ny herinandro maromaro, izay manamarika ny fisainana amin'ny eritreritra momba ny zavatra entin'ny fitiavana, ny tsy fahafahana mieritreritra zavatra hafa (ohatra malaza momba ny fitiavana toy izany - Romeo sy Juliet);
Ny fitiavana ny fehezan-dalàna dia lava kokoa, maharitra hatramin'ny volana maromaro ka hatramin'ny 1.5-2 taona, manamarina ny fisehon'ny fihetseham-po ao an-tsainy, raha manantena ny mpifankatia fa hifanaraka amin'ny faniriany ny faniriana;
Ny fifindrana amin'ny fitiavana - ity dingana ity dia maharitra 1-2 taona, izay mampiavaka ny fahavitrihan'ny fientanam-po sy ny faniriana ny miara-mitoetra amin'ny fotoana rehetra, ny fitokisana, ny fitiavana, ny faniriana ny marimaritra iraisana hanomboka hanamafy ny fifandraisana;
fitiavana - ity dingana ity dia mety maharitra mandritra ny taona maro, raha mifankahazo sy mifankahazo amin'ny samy hafa ny fifankahazoana, ny fifanajana sy ny fisakaizana, dia tsy mifototra amin'ny hormones ny fifandraisana eo amin'io sehatra io, fa amin'ny firaiketam-po sy ny firaisana ara-nofo.
Mandra-pahoviana ny fitiavana no miala lavitra?
Ny fitiavana tsy dia lavitra loatra dia tsy azo antsoina hoe fahatsapana mahazatra, saingy matetika izy io dia maharitra ela kokoa noho ny fifandraisana eo amin'ny fianakaviana. Ireo olona izay manana traikefa am-pitiavana dia azo zaraina amin'ny tarika 2:
"Fanatki" - matetika ny vondron'ity vondrona ity dia ny ankizivavy manana ny fitiavam-bavaka amin'ny maha-olona azy;
Ry malala, miaina an-tsipiriany, fa mivory matetika - amin'izao toe-javatra izao dia misy mpivady maoderina maro maty, izay mila mianina amin'ny fanambadiana "lavitra" na fifandraisana virtoaly.
Ny fitiavana "fanatok" dia tsy mihena ela be noho ny tsy fahafahana ho diso fanantenana amin'ny tanjona fitiavana, satria tsy mifanaraka aminy. Ny fifandraisana toy izany dia somary mahasosotra, ary afaka manaisotra azy ireo fotsiny ianao amin'ny fialamboly amin'ny olon-tsotra.
Tena tia tombontsoa amin'ny mpivady ny olon-droa miaina miaraka aminy - tsy mianiana noho ny olana isan-karazany, mitovy amin'ny fialantsasatra ny fivoriana tsirairay. Izany no antony maha-maharitra ny fifandraisana toy izany. Na izany aza, amin'ity tranga ity dia misy "tranga" sasantsasany - raha manomboka miara-monina ny mpivady, ny fifandirana eo amin'izy ireo dia ho lehibe kokoa noho ny an'ny olon-tsotra, izay mety hahatsapa kokoa ny "mofomamy" amin'ny "onja" misy cocktail hormonina.
Mandra-pahoviana ny fitiavana no miaina aorian'ny fisarahana?
Araka ny antontan'isa, efa 10 taona ny fanambadiana, eo ho eo ny 70% n'ny mpivady no misaraka. Ary tsy voatery miara-mipetraka ny mpivady, ary midika izany fa mbola tia ny iray amin'ireo mpivady. Ireo fijaliana ireo dia afaka maharitra mandritra ny taona maro, satria ny fanambadiana amin'io tranga io dia dingana tsy feno. Miaraka amin'ny dingana mbola tsy vita, na atao gestalt, ny psychologists dia miasa, manampy amin'ny fanesorana io toe-javatra mampikorontana io, ary koa ireo fiantraikan'ny mpiasa - ny ahiahy, ny adin-tsaina, ny fihenjanana, sns. Rehefa nahazo ny fanampian'ny mpitsabo aretin-tsaina iray, afaka manala ny fitiavana tsy mendrika ny olona iray aorian'ny fisarahana ary manomboka fiainam-baovao, ary, ny lasa kokoa, ny tsara kokoa.
Ny psikology ny lehilahy - ahoana ny manosika sy mandresy lehilahy iray?
Atombohy ny fifandraisana
Ahoana no hanamafisana ny firaisana amin'ny vadiny?
Ahoana ny mahaliana olona?
Amin'ny alàlan'ny asa no iasan'ny Senada?
Ahoana no handoavana herinaratra mandritra ny herinandro tsy misy sakafo?
Electric generator amin'izao fotoana izao
Atao amin'ny maso manga sy volom-bolo
Ice cream from kiwi
Mifandraisa amin'ny Zoo, Novosibirsk
Tree on the sign of zodiac
Afaka manome icons ve aho?
Rahoviana no manomboka ny vanim-potoana?
Eo amin'ny tsilo - tombony
Vitaminina amin'ny fanatsarana ny fahitana
Fanandramana aorian'ny fiterahana
Ny alika dia misy diarrhea ra - inona no azoko atao?
Ny fijerin'ny firaisana ara-nofo an'i Amber Hurd sy ny hafanam-pony amin'ny tantaram-piraisankevitry ny fiterahana dia tsy manome alahelo ny mpanao gazety